NAD + Mukukwegura: Basa Reiyo (NR) Nicotinamide Riboside Chloride Chokwadi Mune Anti-kuchembera.
NAD + Vanotungamira mukukwegura: Basa reiyo (NR) Nicotinamide Riboside Chloride Chokwadi muAnti-kukwegura.
Nicotinamide riboside (NR) uye nicotinamide riboside (Chloride)
Nicotinamide riboside (NR) chloride ndiyo yakasvinwa fomu yeicotinamide riboside (NR).
1.Chii chinonzi Nicotinamide Riboside (NR)?
NR chimiro chevhitamini B3 kana niacin. Iyo komputa yakawanikwa muma1940s sekukura kwechinhu H. furuwenza. Pakutanga kwe21st zana ramakore, zvidzidzo zvakawanda zvaizoratidza kuti NR inotungamira yeNAD +. Mumuviri wemunhu, chinovaka muviri chinodzikisa cholesterol, chinodzora njodzi yezvirwere zvemwoyo, chinowedzera mashandiro ehuropi, uye chinoderedza arthritis.
Nicotinamide riboside (NR) ndeye pyridine-nucleoside, inoshanda sepamberi peNAD + (Nicotinamide adenine dinucleotide). NAD + inowedzera mabasa mazhinji ehupenyu anosanganisira kugadzirisa DNA, kugadzirwa kwesimba remagetsi, kumisikidza rwiyo rwechitenderedzwa chemuviri, nezvimwe. Nehurombo, aya mamorekuru anowira pasi nesenescence.
2.Chii chinonzi Nicotinamide Riboside (NR) Chloride?
Nicotinamide Riboside (NR) chloride (NIAGEN) inogadzirwa neNR uye chlorine. Iyo mukomboni inowedzera iwo mazinga eNAD + uye inoita SIRT1 uye SIRT3. Iyo inodzosera kukwegura nekusimudzira oxidative metabolism uye kupikisa kudya-zvine hukama metabolic comorbidities.
MuUS, nicotinamide riboside chloride inowanzozivikanwa seyakachengeteka. Naizvozvo, chinhu chinotenderwa chekudya chekushandisa muprotein shakes, vhitamini mvura, matadza, uye zvine hukama zvokuwedzera.
Hunhu hwave kuchirwisa kuchembera nekutarisa paganda. Pane imwe nguva, iwe unofanirwa kunge wakasangana nezvimwe Anti-aging makirimu ekuchenesa makwinya kumeso, kumeso kweganda, uye kutsvuka. Nekudaro, aya marapirwo akajairika uye epfupi-kwenguva. Iyo nzira yakavimbiswa yekuchembera zvine mutsindo ndeyekutanga shanduko yehupenyu kuseri kwesescence uye kubata nechakakonzera chikonzero.
Vatsvakurudzi kubvira ipapo vakagadzira kubatana pakati peakaderera maNAD + nhanho nezvirwere zvine hukama nezera. Uku kutsva kwekutsvaga kwave kuri icing pane keke mune yekurapa chiyero nekuwedzera mukana wekudzosera kukwegura maitiro. Neichi chikonzero, nicotinamide riboside chloride upfu yagara ichifamba mukoridho yemakiriniki ekutsvagisa marabhoritari nekuda kwekugona kwayo kupidigura wachi yekuberekwa.
Iyo Chemical Rondedzero yeNicotinamide Riboside (Chloride) Poda
Kuchengetedza temp -20 ° C Freezer
Kuziva mabhenefiti eNicotinamide riboside (NR), ndeapi mabhenefiti eNicotinamide Riboside Chloride?
Zvakanakira nicotinamide riboside chloride vs nicotinamide riboside zvakafanana nekuti ivo vaviri vanoshanda kumisikidza NAD uye sirtuin 1 mapuroteni.
Hutano Metabolism Yekutarisira Kufutisa
Zvikamu zvekutsvaga zvakaratidza kushanda kweicotinamide riboside chloride mukuderedza huremu. Vashandisi vanogona kurasikirwa kusvika gumi muzana yemafuta emuviri wavo pasina kudya kudzvinyirira kana kurovedza muviri.
Kutora mushonga kunobatsira kudzikisa LDL cholesterol uchisimudza iwo mazinga echolesterol yakanaka. Izvi zvinoitika kana zvadzorera kumashure kwema enzymes anoenderana neiyo synthesis ye triglycerides. Nekudaro, iko kugadzirwa kweyepasi-density lipoprotein inononoka.
Nicotinamide riboside chloride inobatsira varwere vakawandisa vane chirwere cheshuga. Iyo yekuwedzera inowedzera metabolism nekuvandudza kusagadzikana kweglucose
Kana nhanho dzeNAD dzichiwira pasi pasi pekugona, yako neurological system uye hutano hwekuziva hunogona kunge huri panjodzi. Tora, semuenzaniso, varwere vane chirwere cheAlzheimer vanoratidza yakaderera kuwanda kweNAD + uye mitochondria dysfunction.
Pakati pemakiriniki nicotinamide riboside chloride anoshandisa, manejimendi eiyo neurodegeneration mukukwegura ari pamusoro pechinyorwa. Mushonga uyu unopesana nekukuvara kweiyo intracerebral, ischemic stroke, neurological kuzvimba, uye neuronal kufa.
Imwe yekiyi Nicotinamide riboside chloride inoshandisa inosanganisira kusimudzira utano kuchembera. Iyo komputa inotungamira mukuwedzera mukugadzirwa kweNAD, iyo inoita basa rakakosha musero. Semuenzaniso, inomutsa maseru emagetsi mukati memhasuru, chiropa, neitsvo. Kunze kwezvo, Nicotinamide riboside chloride inodzivirira senescence nekuwedzera kutenderera kweropa mune izvi zvakakosha nhengo.
Nicotinamide riboside chloride inobatsira maitiro ekugadzira nekugadzirisa iyo yekare uye yakakuvara DNA. Kana iko kusangana kweNAD kuchidonha, iyo yakakuvara deoxyribonucleic acid inogona kukonzeresa iyo inoshanda okisijeni marudzi, zvichikonzera kune oxidative kusagadzikana, uye kubata kenza.
Nicotinamide Riboside Chloride Inodzosera Sei Kukwegura?
Munguva yekukwegura, muviri unosangana neshanduko yemuviri sezvo mashandiro emagetsi achidzoka kumashure. Semuenzaniso, muviri unodzora NAD + uye SIRT1 mapuroteni kupfuura aanogona kugadzira. Izvo zvakaderera mazinga eaya coenzymes anomhanyisa senescence nepo ichikonzera kuremara zvine hukama nezera zvinosanganisira chirwere cheshuga, hosha yemoyo, uye kufutisa.
Kugovera nicotinamide riboside chloride inobatsira immune system nekusimudzira mitsipa yeropa, senge maLymphocyte uye leucocyte. Iyo mukomboni inokwenenzvera iyo synthesis yeNAD +, nekudaro, kukwidza iwo mazinga eSIRT1 mapuroteni. Nekudaro, SIRT1 inodzora kukwegura kwevascular nekuwedzera kuyerera kweropa kusvika kumhasuru yemhasuru, yemoyo system, uye matishu etsinga.
Kunze kwezvo, nicotinamide riboside chloride inowedzera inodzosera kukwegura nekuburitsa yakawanda NAD + kubatsira mukugadzirisa DNA mukati meyakaumbwa maseru. Izvi zvinodzivirira kushushikana kweiyo oxidative
Tsvagurudzo iripo inosimbisawo kuti nicotinamide riboside chloride counters bone density kupera, kuderera kwekugadzirwa kwemisodzi, uye fundus hypopigmentation. Aya mamiriro ese akapararira pakati pevakuru.
NAD⁺ Vanotungamira: Nicotinamide Riboside Chloride vs Nicotinamide Mononucleotide
Iko kune anopfuura mashanu mashanu eNAD + vatangiri asi ikozvino, isu tinogona kusududzira tarisiro yedu kune nicotinamide riboside chloride vs nicotinamide mononucleotide (NMN).
Aya maviri macompound anowedzera iyo NAD + nhanho mumuviri kunatsiridza mashandiro emagetsi uye kudzikisira senescence.
Izvo zvinotaurira vaviri ava zvakapatsanuka ndezvekuti NMN haisi vhitamini B3 fomu. Iyo kemikari haina kupinda mukati memusero kudzamara yashanduka ikaita nicotinamide riboside. Icho chikonzero ndechekuti kukura kwayo kwemamorekuru kwakakura kudiki pane kweiyo nicotinamide riboside chloride powder. Nekuda kweichi chivakwa, kuwanikwa kweNMN uye tarisiro yayo yekumisikidza NAD + nhanho rave pfupa rekukakavara munzvimbo yekutsvaga.
Sekureva kwaDr.Sinclair, wezvechiberekero paHarvard University, kugona kweNMN hakufananidzwe. Anoreurura kushandisa izvi kuwedzera, izvo zvinoita kuti anzwe achiri mudiki uye akamutsidzirwa. Sinclair yakaenzana kushanda kweNMN kumhanyisa mune yekutsika. Musayendisiti akataura kuti inovandudza kufamba kweropa, inosimudzira kutsungirira kwemhasuru, uye metabolism inoshanda.
Zvakare, Nicotinamide riboside chloride inotorwa yakananga nesero. Morekuru iri vhitamini B3 imwe nzira. Ichawedzera NAD + nhanho inopfuura makumi matanhatu muzana mumuviri wemunhu. Kusiyana nevazhinji Vatungamiri veNAD, iyo iri pane rondedzero yeDAA, nicotinamide riboside (NR) chloride iri mune whitelist yeGAS (Inowanzozivikanwa Seyakachengeteka) zvigadzirwa zvekudya.
Wadii kutora NAD upfu zvakananga? Nicotinamide Riboside Chloride vs Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD)
Sezvo tarisiro yedu iri yekusimudzira NAD mumuviri, iwe ungangodaro uchibvunza kuti nei kukakavara pamusoro peicotinamide riboside chloride. Haufanire kutonga NAD zvakananga musystem yako pane kupfuura nekunetseka kwekushandisa vepakati senge NIAGEN, NR, kana NMN? Zvakanaka, ndibvumire kuti ndikupfupise nezve nicotinamide riboside chloride vs nicotinamide adenine dinucleotide.
Chikonzero chikuru nei usingafanire kutora NAD zvakananga ndechekuti iyo biomarker haina kukwana mukamuri.
Iko kusanganisa kwekushandisa nicotinamide riboside chloride vs nicotinamide adenine dinucleotide ndeyekuti iyo yekutanga inogoneka kune iyo plasmic membrane. Chiyero chayo chekumwa chakanyanya kukwirira kuburikidza negadziriro yekugaya, kupinda muropa, uye pakupedzisira kuuropi.
Nicotinamide riboside (NR) Chloride Dosage: Mashandisiro Aungaita?
Muna 2016, iyo nicotinamide riboside chloride yekuwedzera yakahwina iyo GRAS mamiriro. Gore rakapfuura, iyo FDA yaibvumidza sechinhu chinobva kuna niacin uye chinongedzo chekudya padanho rezuva nezuva re180mg.
Parizvino, iyo yakanyanya marezinesi nicotinamide riboside chloride dosage mazinga kusvika 300mg pazuva. Nekudaro, mune kumwe kuyedzwa kwevanhu, izvo zvidzidzo zvaizonwisa kusvika 2000mg yemushonga. Iwe unofanirwa kucherechedza kuti kupfuudza muyero we500mg kunozotungamira kune isingagone nicotinamide riboside mhedzisiro.
Iyo niacin dose inoshanda chete kune utano vanhu vakuru, vanosanganisira vakadzi vanotarisira uye vanaamai vanoyamwisa.
Nicotinamide Riboside Chloride Side Migumisiro: Zvakachengeteka here kushandisa Nicotinamide Riboside Chloride Supplement?
Nicotinamide riboside chloride powder yakachengeteka uye inobata chinzvimbo chakachiva kwazvo cheGRAS zvinhu. Izvi hazvireve kuti mukomboni yacho haina zviratidzo zvakashata. Mushure mezvose, mvura ihwo hupenyu asi zvakare inodhonzera zvimwe zvisina kunaka paunoushandisa zvisizvo. Kuti udzivise mhedzisiro, ita shuwa kuti yako Nicotinamide riboside chloride dosage yakaderera sezvinobvira.
Kumwe kwekukanganisa kwakaipa kunosanganisira;
Kuita kweganda kwakadai sekuputika uye kuwedzera kupwanya
Kunze kwezviri pamusoro apa nicotinamide riboside chloride mhedzisiro, iwe zvakare unogona kusangana kuonda. Nekudaro, mhedzisiro iyi chikomborero pakuvanza kunyanya kana iwe uri kufutisa, kufutisa, kana iwe uri kuyedza kuchengetedza huremu hwako mukutarisa.
Ndekupi Kwokutenga (NR) Nicotinamide Riboside Chloride mu Bulk?
Iwe unogona kugadzira nicotinamide riboside chloride kutenga kuchitoro chepamhepo. Kunyangwe iwe uchida iyo yemishonga-giredhi poda muhuwandu kana imwe yekudya-giredhi yekuwedzera, ita shuwa yekutarisa kune chaiye mutengesi. Iko kuwedzera kwekutengesa chaiko ndekwekuti iwe unogona kuenzanisa mitengo uye tarisa chaiyo-nguva mutengi mhinduro. Nekudaro, iwe zvakare ungango wira kune zvekunyepedzera.
Isu tiri chiratidzo chinovimbwa uye zvese zvigadzirwa zvedu zvinonamira kune ehunhu ekudzora matanho. Isu tinobata nemakemikari akasiyana uye zvokudya zvokuwedzera. Taura nesu kuti tipe odha yako uye nekodhi yekodhi.
Conze, D., Brenner, C., & Kruger, CL (2019). Kudzivirirwa uye Metabolism YeYakareba-Nguva Kutungamira yeNIAGEN (Nicotinamide Riboside Chloride) mune Randomized, Double-Blind, Placebo-Inodzorwa Kliniki Kuedzwa kweVane Hutano Kuwedzeredza Vakuru. Scientific Reports.
Bogan, KL & Brenner, C. (2008). Nicotinic Acid, Nicotinamide, uye Nicotinamide Riboside: Kuongorora kweMorekuru kweNAD + inotungamira maVitamini muKudya kwevanhu. Ongororo yegore negore yeNutrition.
Mehmel, M., Jovanovic, N., & Spitz, U. (2020). Nicotinamide Riboside - Iyo Yazvino Nyika Yekutsvagisa uye Kurapa Kunoshandisa.
Turck, D., Castenimiller, J., uye al. (2019). Kuchengetedzwa kwaNicotinamide Riboside Chloride seNovel Chikafu Chichienderana neMutemo (EU) 2015/2283 uye Bioavailability yeNicotinamide kubva mune ino Sosi, muChinyorwa cheDirective 2002/46 / EC. EFSA Chinyorwa.
Elhassan, YS et al. (2019). Nicotinamide Riboside Inowedzera iyo Yakakwegura Yevanhu Skeletal Muscle NAD + Metabolome uye Inokonzeresa Transcriptomic uye Anti-Inopisa Zviratidzo. Cell Reports.
Aman, Y., Qiu, Y., Tao, J., & Fang, EF (2018). Kurapa Kunogona Kwekusimudzira NAD + muKukwegura uye Zera-Zvakabatana Zvirwere. Dudziro Mushonga weKuchembera.
RAW NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE (NMN) HODZI (1094-61-7)
RAW LORCASERIN HCL PODHA (846589-98-8)
1.Nicotinamide riboside (NR) uye nicotinamide riboside (Chloride)
2.The Chemical Rondedzero yeNicotinamide Riboside (Chloride) Poda
3. Kuziva Zvakanakira Nicotinamide riboside (NR), ndeapi mabhenefiti eNicotinamide Riboside Chloride?
4.Nicotinamide Riboside Chloride Inogona Kudzorera Sei Kukwegura?
5.NAD⁺ Zvinyorwa: Nicotinamide Riboside Chloride vs Nicotinamide Mononucleotide
6.Sei usingatore NAD upfu zvakananga? Nicotinamide Riboside Chloride vs Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD)
7.Nicotinamide riboside (NR) Chloride Dosage: Mashandisiro Aungaita?
8.Nicotinamide Riboside Chloride Side Migumisiro: Zvakachengeteka here kushandisa Nicotinamide Riboside Chloride Supplement?
9.Kupi Kwokutenga (NR) Nicotinamide Riboside Chloride mu Bulk?